eyeliner အစား ဘာလေးတွေကို သုံးလို့ရသေးလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်လိုက် | CosmeticMyanmar
Home » Article » eyeliner အစား ဘာလေးတွေကို သုံးလို့ရသေးလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်လိုက်
မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ပြင်ဆင်ခြယ်သရတာ တကယ့်ကို အချိန်လည်းပေးရပြီးတော့ လှဖို့လည်း ကြိုးစားရပါသေးတယ်။ တစ်ဖက်ကလှသွားရတောင် နောက်တစ်ဖက်က ညီဦးမှ eyeliner ဆွဲရင် ပိုဆိုး။ အဲ့တော့ မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုမှာ မျက်ဝန်းတစ်စုံပြင်ဆင်တာကလည်း အချိန်ပေးရတာပါနော်။ အဲ့တော့ eyeshadow လေးကို ညီလည်း ညီချင်တယ် အချိန်ကုန်လည်းသက်သာချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို ကြည့်လိုက် အကျိုးရှိစေရမယ်။
1.eyeliner ကို eyeshadow နဲ့သုံးပါ။
eyeliner ကို eyeshadow လို သုံးတာကလည်း အချိန်ကုန်သက်သာစေပါတယ်။ eyeliner ဆွဲလိုက်တာက တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မညီ ပြီးရင် မခြောက်သေးခင် ပေပွစေတာကလည်း အလုပ်တစ်ခု။ ဒါတွေ အကုန်ပြီးသွားအောင်တစ်ဆင့်တည်းနဲ့ လုပ်လိုက်မယ်။ eyeshadow လေးကို မျက်ခွံရဲ့တစ်ဝက်လောက်ကို ခြယ်ပေးပါ။ ခြယ်တဲ့နေရာမှာလည်း crease နေရာလို့ခေါ်တဲ့နေရာကို အရောင်လေးပိုရင့်ပေးပါ။ အဲ့ဒါက မျက်ရစ် မရှိတဲ့သူတွေ မျက်စိမှေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်နော်။
ဒီလိုမျိုးလေးတွေပါ။ eyeliner လည်း မလို eyeshadow နဲ့ပဲအဆင်ပြေတော့ မိုက်တယ်လေ။ အရမ်းကြီးတော့မများစေနဲ့ပေါ့နော်။ အရောင်ကတော့အညိုရောင်လေးတွေ အနက်ရောင်လေးတွေနဲ့ဆိုပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ ဘဘာဝကျကျလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်။
၂. Soft Pen/ Stick လေးတွေနဲ့အစားထိုးကြည့်ပါ။
ဒီလိုမျိုးလေးတွေက အချိန်ကုန်လည်း သက်သာသလို ခရီးသွားရင်လည်း သယ်သွားရတာအဆင်ပြေပါတယ်နော်။ လက်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် brush လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ဖြန့်ပေးလိုက်တာနဲ့ လှပတဲ့ မျက်ဝန်းလေးကိုရပြီလေ။
၃. LIp stick လေးတွေနဲ့ ပြောင်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ။
Lip stick လေးတွေကို လက်လေးနဲ့ ပွတ်ပြီးပြန်ဖြန့်ပေးလိုက်တာကလည်း သဘာဝကျတဲ့ မျက်ဝန်းလှလှလေးကို ရနိုင်စေပါတယ်နော်။ budget လည်း ချွေတာရာရောက်တော့ ပိုတောင် အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမျိုး အချိန်ကုန်သက်သာအောင် eyeshadow တစ်ခုကို ပြီးအောင် ခြယ်မလဲ။ လှအောင်ရောဘာလေးတွေကို ပြောင်းခြယ်မလဲဆိုတာကတော့ လုံလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ပျိုတို့ဒီထက်ပိုလှစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
တစ်လအတွင်း တင်သားအကိတ်လေးဖြစ်ဖို့ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အပီသာလုပ်